CUNTADA LAFTA SIDA BACRIMINTA: TILMAAMAHA ISTICMAALKA - SOOSAARKA DALAGGA
Cuntada lafta: sida loo dalbado bacriminta dabiiciga ah
Shuruudaha dhul ama xayawaan yar oo aan lahayn bacriminta joogtada ah, waa wax aan suurtogal ahayn in la gaaro xilliga sii kordhaya ee dhirta dhirta gudaha ama beerta. Khabiiro badan oo ku saabsan kobcinta dhulluxyaduna waxay ku talinayaan, marka lagu daro xalalka caadiga ah ee laga helo mullein iyo digaaga digaaga, noocyada kiimikada oo kale ah. Waa maxay lafaha lafaha, doorka uu ka ciyaarayo horumarinta dhirta, meesha iyo marka walaxda la isticmaalo iyo sida loo sameeyo si sax ah - waxaynu ka sheekeyn doonaa arrimahan dambe ee maqaalkan.
Cuntada lafuhu waa budo ah, mugdi yar oo leh qoyaan qoyan oo sarreeya sababtoo ah dufanka xayawaanka. Maaddada waxaa laga soo saaraa habka lafaha. Alaab-qeybiyeyaasha ugu muhiimsan ee alaabta ceeriin ee loogu talagalay soo saarida cuntada lafaha waa dhirta wax lagu beero. Sidoo kale waa in lagu xareeyo dhakhtarka xoolaha ee la wareegay xoolaha. Dhammaan walxaha waa inay noqdaan kuwo cusub oo aan la qaadsiin.
Waa muhiim! Marka la eego kala qaybsanaanta tartiib-tartiibka ah ee qaybaha xubinta, cuntada lafta waxaa lagu talinayaa in la sameeyo 2-dii kasta-3 sano.
Ugu horreyntii, waxaa lagu jajabiyaa kilyaha, ka dibna la qalajiyey mar kale iyadoo la adeegsanayo qalab gaar ah. Ganacsi ahaan, substrate waxaa lagu sameeyaa 3 siyaabood. Qaabka ugu caansan iyo fudud - sida caadiga ah ee qashinka xoolaha ah ee caadiga ah. Hase yeeshee, khasaarahoodu waxay ku jiraan xaddiga ugu hooseeya ee fosfooraska.
Tiknoolajiyad kale ayaa ah qalabka tamarta ceeriin ah. Tani waxay kuu oggolaaneysaa in aad wax yar kor u qaaddo qiyaasta nafaqada yar yar. Laakiin qiimaha ugu sarreeya ayaa la gaari karaa markii hore ee lafaha. Nooca ugu dambeeyay ee wax soo saarka waxa loo tixgelinayaa tayada ugu sareysa
Guriga, waxaad sidoo kale samayn kartaa bacrimin la mid ah, gaar ahaan haddii ay jiraan geesaha, lafaha, geedaha xayawaanka ah, kalluunka iyo digaaga. Si aad tan u samayso, waxaad u baahan tahay inaad ku tirtirto alaabta ceeriin ah oo aad ku shubto qaybo yaryar.
Waa muhiim! Tixgeli in nidaamku waqti badan qaato oo uu u baahan yahay hawo wanaagsan, sidaas awgeed waa ka fiicantahay in lagu fuliyo shaqada oo dhan wadada, shooladda si gaar ah u qalabaysan.
Dabadeedna waxa loo baahan yahay in la geliyo xayawaan dhagax ah, ku shub biyo iyo kariyo ilaa inta la jilcinayo. Qalabka ceeriin ee la qaboojiyey ayaa ku xiran in la burburiyo.
Meesha la isticmaalo
In beeraha, budada this organic waa wax aad u badan. Waxaa si weyn loo isticmaalaa sida wax lagu daro quudinta xoolaha iyo bacriminta wax soo saarka beeraha.
Maaddadu waxay ku habboon tahay quudinta beerta, qurxinta, beerta, ubaxa, dhirta lagu koriyo iyo dhirta dhirta.
Waxaad xiisayn doontaa inaad ogaato ku saabsan Bacriminta noocan oo kale ah sida nettle, eggshells, peels basasha, maqaarka muuska, iyo caanaha.
Isticmaalka cuntada lafaha ee beerista, sariiraha ubaxa iyo beerta waxaa lagu caddeeyey jiritaanka tiro badan oo ah nitrogen iyo fosfooraska. Lix bilood gudahood ka dib marka lagu daro walaxda, ciidda goobta waxay noqotaa nafaqo iyo jilicsan.
Intaa waxaa dheer, ma aha oxidise, xitaa marka la isticmaalo mulch ku habboon habkan. Isticmaalka substrate waa ku haboon tahay xilliga guga ama diyaarinta ciidda xilliga dayrta ee beeritaanka dalagyada. In berry iyo beerta, khubarada ku talinaynaa in ay marka hore kala firdhaan bacriminta oo kaliya ka dibna qaadaan qoto dheer oo qoto dheer.
In beerta halkii mitir laba jibbaaran waxay u baahan doontaa inay sameyso 200 g oo budo ah, qiyaasta qiyaasta ayaa lagu hagaajin karaa iyadoo ku xiran tilmaanta physico-chemical ee carrada.
Ma taqaanaa? Hilibka iyo lafaha cuntada sida bacriminta waxaa loo isticmaalaa xitaa qabiilooyinka aasaasiga ah. Waxaa la aaminsan yahay in ay ahaayeen kuwa helay hantidooda faa'iido leh iyaga oo si kama 'ah u ogaaday in dalagga ugu wanaagsan uu ku koraa meesha xayawaan dhacday ka dib burburkii hadhaaga.
Milkiilayaasha qaar waxay wadaagaan waayo-aragnimada ah in ay lafo-gurisaan cawska cawska. Xaaladaha noocan oo kale ah, markasta way ku mahadsantahay rooga cagaaran ee dhalaalaya oo qafiif ah. Beeraha kale iyo beeraha ubaxa waxaa lagula talinayaa inay ku daraan budada si isku dhafan nafaqo loogu talagalay dhirta. Tani waxaa la sameeyaa si loo xoojiyo xalinta quudinta fosoorka iyo potassium. Wax soo saarka dalagyada, shaqada ugu weyn ee cuntada lafaha waa in la wanaajiyo horumarinta dhaqanka, Bisaylka degdegga ah ee miraha iyo kordhinta wax-soosaarka.
Waxay u egtahay in bacriminta budada ah ee laga helay lafaha xayawaanka ay ku kooban yihiin nafaqeeyayaalka yar ayna ku tartami karin qolalka kale ee macdanta. Taasi waa, kaliya waa qayb kale oo dheeraad ah oo ku saabsan xalinta dheeraadka ah.
Waa muhiim! Cuntada lafuhu marna ma aha sababta keentay jiritaanka dhirta. Dammaanad adag oo ah xakamaynta caafimaadka xoolaha ee walxo cayriin iyo nadiifinta bilowga ah ayaa loo tixgelin karaa damaanadqaad.
Laakiin dhammaan caqiidooyinkan khaldan ee ay ku kaceen khubarada. Marka loo eego Fiisooyinka, lafaha iyo lafaha iyo cunidda lafaha ayaa si fiican u shaqeyn kara bacriminta madaxbannaan, iyada oo soo saarayaashu tilmaamayaan tilmaamaha isticmaalka.
Marka loo eego walxaha kale, substrate waxaa lagu qiimeeyaa:
geeddi-socodka gaaban ee qaybo kiimiko ah, oo hubiya saameynta muddada-dheer ee warshadda iyo dharka udgoonida leh nafaqooyinka;
waxyeelo - walaxda ayaa la isticmaali karaa xitaa dhowr toddobaad ka hor goosashada (sidoo kale, xirfadlayaasha xitaa waxay kugula talinayaan inay samaystaan ​​budada 14 maalmood ka hor inta aan miro-khudreyn si loo hagaajiyo sifooyinka dhadhanka);
awoodda ah in uu deoksaydho carrada, sidaas awgeed phosphoazotin xaddad xadidan ayaa lagu dabaqayaa meelaha leh pH alkaline;
awooda lagu hagaajinayo dhirta dhirta ee dhammaan marxaladaha (dhirta biomass xoogan, ubax, samaynta iyo koriinka miraha).
Ma taqaanaa? Boorso kiilo ah oo lafaha ah ee Ukraine ku kharash yar 10-20 hryvnia.
Noocyada iyo halabuurka
Caqli ahaan, cuntada lafta waxaa loo yaqaan "tricalcium phosphate", taas oo u sabab ah qaybaha ugu muhiimsan ee budada. Waxaa ku jira xaddi badan oo ah kalsiyum iyo fosfooraska. Qaybaha dheeraadka ah waa baruurta, kaneecada, fosfooric acid, nitrogen, sodium, chlorine, sulfur, saamiga boqolleyda ee u dhaxeeya 1.5-10%.
Waxay noqon doontaa mid waxtar kuu leh inaad wax ka barato cuntada dolomite iyo kalluunka.
Iyadoo ku xiran tiknoolajiyada diyaarinta iyo soo saarida walxaha lafaha iyo halabuurka lafaha, waxaa jira noocyo badan oo ka mid ah:
Si joogto ah - waa ugu raqiisan, sababtoo ah waa wax aad u sahlan in la soo saaro, uma baahnid shaqeyn dheeraad ah oo walxo cayriin ah ka hor inta aan la jiidin oo ku jira 15% oo keliya oo ah fosfooraska.
Steamed - iyadoo ay sabab u tahay daaweynta kululaynta hordhaca ah ee wax soo saarka, shirkadaha wax soo saarka waxay maamulaan inay helaan 25% fosfooraska.
Xaydha-free waa nooca ugu qaalisan oo qiimo leh dhammaantood, tan iyo inta xaddiga fosfooraska ku jira waa 35%.
Sida loo isticmaalo bacrimin
Dhirta bacriminta, waxaad isticmaali kartaa habka xididka iyo foliar. Kiisaska intooda badan, budada ayaa si fudud loo dhexgeliyaa dhulka marka la diyaarinayo beeritaanka. Khubarada sidoo kale waxay kula talinayaan inay bacrimiyaan beerta, beerta iyo dhirta dhirta muddada koritaanka daaqsinka.
Ma taqaanaa? Cuntada lafaha oo dhammaystiran waxay hoos u dhigtaa lix bilood oo keliya.
Iyadoo ku xiran nooca dhirta iyo sifooyinka ciidda, waxaa loo sameeyaa habkan:
On cawska ku kala firdhay budada qalalan at heerka of 200 g halkii 1 sq. Km. Goobta m (meelaha hawadu ku jirto, xaddiga bacriminta waa suurad wacan in la labanlaabo).
Wixii dhirta beerta gudaha iyo beerta, waxaa lagu talinayaa in lagu daro maadada qalalan ee saamiga 1: 100, iyo xalka dareeraha waxaa la diyaariyey 1 kg oo bur ah iyo 2 baaldiyo oo biyo kulul ah. Xaaladda dambe, ganaaxu wuxuu u haray hal usbuuc hal mar, walaaqaya maalin kasta. Kadibna waxaa la mariyaa shaandhada isla markaana kor u qaadeysa biyaha si loo helo wadarta 380 litir oo dareere ah.
Wixii geedo ah ee dalagyada khudradda ah, hal ama laba qaado oo budo ah ayaa si toos ah loogu darayaa ceelasha.
Marka la beerto baaritaanka berry ee god kasta waxaad u baahan tahay inaad sameyso ilaa 70 g oo ah walxaha guga iyo ilaa 120 g xilliga dayrta.
Dhaqanka ubaxyada caleemaha ah (tulips, gladioli, daffodils, lakabadaha) waxaa lagu talinayaa in lagu daro 30 g oo ah walax kasta si wanaagsan.
Warshaduhu waxay kugula talinayaan inaad ku kaydiso cunto lafaha qolalka laga ilaaliyo qoyaanka, kulaylka iyo qorraxda tooska ah. Baakada la iibsaday waa suurad wacan in ay ku jiifiso daadad fiican, oo aan lahayn jiirka ama cayayaanka kale. Si arrintan loo sameeyo, waxaad u baahan tahay inaad ka hesho shelf si aan loogu talagelin carruurta iyo xayawaanka.
Waa muhiim! Cacti, azaleas, rhododendrons, iyo dhir kale oo doorbida jawi asiidh ah, cuntada lafdhabarta ah ayaa ka hortageysa.
Haddii aan ka hadleyno substrate-ka guriga, waa in lagu ridaa warqad ama bacaha dhogorta ah. Ogow in saameynta budada "ultraviolet" ay noqoto sun.
Tani waxay sabab u tahay ficil-celinta kiimikada ee fosfosotiin, taasoo ka dhalata heerkul sare. Marka la gooyey, baruurta waxay noqotaa sun ah. Waxaa lagu talinayaa in si goos goos ah hubiso xaaladda bur ah, qaso iyo qalalan. Ogaanshaha waxa iyo sida loola socodsiiyo, waxaad ku kalsoonaan kartaa nabadgelyadiisa noolaha iyo kiimikada ee dhirta. Xor ayaad u diyaarsataa inaad ku quudiso ubaxa, khudradda, berry, miraha leh budada, waxayna kugu mahadnaqayaan miraha tayo leh iyo qurxinta. Waxaan rajeyneynaa in talooyinkayagu ay kaa caawin doonaan tan.